Tijaabinta Isticmaalka: Baahida loo qabo Aragtida Aadanaha ee lagu hagaajinayo Khibradda Macaamiilka | Martech Zone
Suuqgeynta casriga ahi waxay ku saabsan tahay macaamilka. Si loogu guuleysto suuqa udub dhexaadka macaamiisha, shirkadaha waa inay diiradda saaraan khibrada; waa inay u damqadaan oo dhagaystaan ​​jawaab celinta macmiilka si ay had iyo jeer u horumariyaan khibradaha ay abuurayaan oo ay keenayaan. Shirkadaha soo dhaweynaya aragtida aadanaha oo ay ka helaan jawaab celin tayo leh macaamiishooda (oo aan kaliya aheyn xogta sahanka) waxay awoodaan inay si wanaagsan ula xiriiraan oo ay ula xiriiraan iibsadayaashooda iyo macaamiishooda siyaabo macno leh.
Uruurinta fikradaha aadanaha waxay lamid tahay inaad naftaada gasho kabaha macaamiishaada si aad wax u barato, u fahanto una horumariso baahiyahooda. Aragtida aadanaha, shirkaduhu waxay awoodaan inay soo qabtaan sirdoonka lagama maarmaanka ah ee loogu baahan yahay inay ku gaaraan macaamilka habab cusub, hal abuur leh, iyo habab wax ku ool ah oo saameyn togan ku yeelan kara dakhliga, haynta, iyo daacadnimada.
Tijaabinta isticmaale: Dulmarka Wax soo saarka
Khibradaha xun ee websaydhada iyo barnaamijyada, iyo dunida dhabta ah, kuma koobna oo keliya macaamiisha, laakiin waxay ku kacayaan shirkado malaayiin doolar sanadkiiba. Imtixaanka Isticmaalka waxay u sahlaysaa ururada inay ka helaan jawaab celin dalabkooda suuqa bartilmaameedkooda — meel kasta oo ay joogaan. Iyada oo la adeegsanayo barnaamijka baahida loo qabo ee 'UserTesting', ururadu waxay daaha ka qaadi karaan 'sababta' ka dambeysa isdhexgalka macaamiisha. Fahmitaanka ujeedada, ganacsiyada waxay horumarin karaan oo bixin karaan khibrado layaableh, ilaalin karaan astaanta, waxayna wadi karaan qanacsanaanta macaamiisha. Iyada oo loo marayo barnaamijka 'UserTesting', ganacsiyada waxay:
Target- Raadi oo ku xirnow dhagaystayaasha saxda ah ee loo baahan yahay, iyada oo aan la helin dadaal, wareegyo dheer ama kharashyo la xidhiidha gacan ku qorista dadka si ay u bixiyaan jawaab celin.
Ka hel macaamiisha iyo xirfadleyda ganacsiga adduunka oo dhan dalab iyadoo laga codsanayo kan ugu weyn, ee kala duwanaanta la xaqiijiyay ee kaqeybgalayaasha daraasadda.
Taabo macaamiisha, shaqaalaha, iyo la-hawlgalayaasha emayl, warbaahinta bulshada ama wadiiqooyin kale.
Ku xir shaqsiyaad gaar ah, adoo adeegsanaya awoodaha shaandhaynta, sida juqraafi ahaan, tirakoobka dadka, iyo shuruudaha dhaqan-dhaqaale.
La xiriir dhagaystayaasha takhasuska leh oo ay adag tahay inaad la xiriirto wada-hawlgalayaasha iyadoo la kaashanayo kooxdeena khubarada ah.
Hubso inaad hesho jawaab celinta ugu tayada sareysa si aad ugu wargaliso dadaalkaaga CX iyadoo la adeegsanayo barnaamijka macaamiisha 1aad ee la hubiyey ee la hubiyay ee 'UserTesting' iyo guddi xirfadlayaal ganacsi leh
Ka qaybgal- Xullo nooca imtixaannada oo dhali doona fikradaha ugu waxtarka badan, ee waxqabad leh iyadoon lagaa helin dhibaatooyinka maamulka ama baahida loo qabo khibrad cilmi-baaris.
Ku hel jawaabaha ugu yar 1-2 saacadood adoo adeegsanaya sheybaarro, shaqaalaysiin otomaatig ah, iyo astaamo aad ku tijaabineyso khibrad kasta.
Ka hel ra'yi-celin wax kasta, sida desktop-ka, barnaamijka moobiilka, ama waaya-aragnimada goobta, iyo alaabooyinka marxalad kasta oo horumarineed.
Qalab fudud si qofkasta oo kooxdaada ka mid ahi u abuuri karo daraasad toos ah ama duuban mashruuc kasta, wakhti kasta.
Natiijooyinka saacadaha gudahood waxay ka dhigan yihiin inaad tijaabin karto wax kasta oo aad u baahan tahay aragtida macmiilka, ka saarista mala-awaalka ka dambeeya maal-gashigaaga ganacsiga - ha ahaadeen noocyada alaabooyinka, naqshadeynta naqshadaha, farriimaha suuq-geynta, sawirrada ololaha, nuqul websaydhka ah.
La shaqee khubaradeenna markaad u baahan tahay caawimaad xagga qaabeynta daraasado aad u adag.
Fahmaan- Soo qabashada iyo iftiiminta falcelinta macnaha leh iyo jawaabaha, ka dibna ku sii ballaadhi hay'adda oo dhan si loo kordhiyo wadashaqeynta iyo isku raacsanaanta.
Iyada oo dhammaan fikradaha macaamiisha hal meel ah, falanqeyn deg deg ah ayaa suurtagal ah iyadoo laga soo qaadanayo xogta buuxda ee xogta.
Soo saar oo muuji garaadka muhiimka ah ee macaamiisha si loo wado is afgarad ku saabsan go'aannada saxda ah iyo tallaabooyinka xiga.
Wadaagista awoodaha ayaa fududeynaya is dhexgalka bulshada natiijooyinka ka jira guud ahaan ururka.
Ka iibso-daneeyayaasha adiga oo soo bandhigaya caddeyn cad, oo aan muran ka jirin oo ku saabsan waxa ay macaamiisha rabaan, u baahan yihiin iyo filayaan.
Tijaabinta Isticmaalaha: Sida ay u shaqeyso
Tijaabinta Isticmaalaha: Astaamaha Muhiimka ah
UserTesting waxay sii wadaa inay xoojiso madal fahamka aadanaha oo waxaad kudarsatay shaybaar cusub, qaababka socodka ogolaanshaha, tijaabinta geedaha, isdhexgalka Qualtrics XM Platform, iyo astaamaha casriga ah.
Falanqeeyaha iyo jawaab celinta fiidiyowga ah si aad u fahamto "sababta" ee ka dambeysa rajooyinka macaamiisha
Isku-darka barnaamijkooda 'Qualtrics XM platform' si loogu kordhiyo xogta sahanka iyadoo la adeegsanayo aragtiyo tayo leh, taasoo keeneysa macno weyn oo ku saabsan "sababta" ka dambeysa natiijooyinka sahanka.
Barashada mashiinka kabaallaynta si dhakhso leh kor loogu qaado daqiiqadaha macaamiisha ugu muhiimsan
Adeegso astaamo summad leh si aad uhesho oo aad u fahamto daqiiqadaha ugu muhiimsan gudahood fadhiga jawaab celinta fiidiyowga
Ka faa'iideyso qaabka barashada mashiinka si aad u qiimeyso jawaab celinta fiidiyowga iyo falanqaynta waqtiga-dhabta ah.
UserTesting My qorista - MyRecruit waxay awood u siineysaa shirkadaha inay dhex galaan macmiilkooda, shaqaalahooda iyo keydkooda macluumaadka si ay u ururiyaan fikradaha iyo jawaab celinta. Markii la baarayo khibradaha dhagaystayaasha horay u jiray, shirkaduhu waxay hubin karaan inay aqoonsanayaan baahiyo ganacsi oo gaar ah oo aan hadda la daboolin.
Qorista My, waxaad ku sameyn kartaa:
Soo aruuri baahida, waxqabadka, jawaab celinta macaamiisha jirta, khubarada warshadaha, iyo inbadan.
Ku hel fikradaha xitaa si dhakhso leh adoo adeegsanaya tijaabinta is-adeegsiga oo aad la socoto dhagaystayaasha aadka loo beegsanayo.
Kaqeyb geli shaqaalaha oo ka abuur xamaasad ku saabsan magacaaga iyo wax soo saarkaaga.
Isticmaalka Wadahadalka Tooska ah - Wadahadal Toos ah waxay bixisaa wareysi toos ah oo dhexdhexaad ah oo si otomaatig ah loo duubo loona qoro si loo hubiyo in dhammaan barashada la qabto oo lala wadaago guud ahaan ururka. Wadahadalka Tooska ah wuxuu awood u siinayaa isla maalin, 1: 1 wadahadalada macaamiisha ee isdhexgalka ah waxayna taageertaa codka waxqabadyada macaamiisha. Wareysiyayaashu waxay awoodaan inay tixgeliyaan tilmaamaha aan hadalka ahayn, sida muuqaalka wajiga iyo codka codka si ay sifiican ugu naxaan dhamaadka isticmaalaha - waxayna si dhaqso ah udub dhexaad u noqon karaan ama u hagi karaan dooda si ay ugu darsadaan mowduucyo gaar ah ama ay u sii fahmaan aragtida macaamiisha. Wadahadalka Tooska ah, kaqeybgalayaasha waxaa lasiiyaa fursad ay ku bixiyaan macno dheeri ah oo ku saabsan su'aalaha, la wadaagaan halka caqabadaha lagala kulmay, shirkadana la siiyo fikrado horumarineed.
Daraasad dhinac saddexaad ah waxay muujineysaa in kooxaha xallinta shaqsiyadeed ay la kulmi karaan caqabado badan. Kuwaas waxaa ka mid ah ka qayb qaadashada waqtiga, dhibaatada qorista tijaabiyeyaasha khuseeya, fikirka kooxeed, iyo qiimaha sare iyo eexashada tijaabinta. Isticmaalka 'UserTesting' wuxuu yareynayaa caqabadahaas isagoo sameynaya sameynta cilmi baaris isticmaale (dhexdhexaad ama aan la qaabeyn), weydiisashada jawaab celinta macaamiisha iyo / ama maamulida 1: 1 wareysiyada fudud, qaali ah, dalab iyo waqti-dhab ah.
Qiimaha Ganacsi ee Khibrad Macaamil Weyn
Sida laga soo xigtay Forrester, Boqolkiiba 73 shirkadaha waxay tixgeliyaan waaya-aragnimada macaamiisha mudnaanta koowaad, laakiin boqolkiiba hal keli ah shirkadaha ayaa bixiya khibrad aad u wanaagsan - laakiin haddii aad rabto macaamiishaadu inay daacad ahaadaan waa inaad u heellan tahay inaad ku dhisto khibrada. Si aad si togan ugu saameyso dakhliga hoose, waa inaad maareeysaa oo aad maal gashataa khibrada macmiilka isla markaana aad aqbashaa barashada joogtada ah iyo daahfurka si aad had iyo jeer uga falceliso una wanaajiso khibrada aad u dhiibto qofka isticmaala. Maanta, hoggaaminta suuqa iyo kala duwanaanshaha tartanka waxaa si isdaba joog ah loo go'aamiyaa cidda bixisa khibrada macaamiisha ugu fiican. Shirkadaha maalgashada CX waxay ka faa'iideystaan ​​hagaajinta sii haynta macaamiisha, qanacsanaanta macaamilka iyo kordhinta iibka iyo fursadaha kor u kaca.
Waxaan hadda joognaa xilli ay waayo-aragnimada macmiilku lagama maarmaan u tahay gunta shirkadda. Macaamiisha waxay ku saleeyaan khibrad wanaagsan waxa ay u maleeyaan khibrad wanaagsan inay ahaato; kuma salaysna waaya-aragnimooyin ay hore u soo mareen. Sababtaas awgeed, waa muhiim in la siiyo shirkadaha fikradaha ay u baahan yihiin inay si joogto ah u horumariyaan si ay ula kulmaan rajooyinka macaamiisha.
Andy MacMillan, Maamulaha guud ee barnaamijka 'UserTesting'
Saxeex u noqo Tijaabinta Bilaashka ah ee Isticmaalaha
Tags: Andy MacMillankhibrada macmiilkaxeeladaha khibrada macaamiishacxganacsiqalabka jawaab celintanashqadeynta bini-aadamkaKooxda Intercontinental Hotelswada hadal toos ahMicrosoftfalanqaynta barnaamijka moobiilkajawaab celinta barnaamijka moobilkatijaabada moobilkashaqaalaysiintahal-abuurnimo wax soo saarQualtrics XMjawaab celinta goobtaimtixaankatijaabada isticmaalahatijaabinta isticmaalahacodka macmiilkawalmart canada